WWE ဆိုသည်မှာ - Thutazone
မူရင်းရေးသားသူ – Myanmar WWE Fans Admin
WWE ဆိုတာ အမေရိကန်အခြေစိုက် ဖျော်ဖြေရေးနပမ်းပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရှည်ကောက် World Wrestling Entertainment ဆိုတဲ့ နာမည်အရှည်ကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင် WWF နဲ့ ခု WWE နဲ့ကလည်း တူတူပါပဲ။ ပိုင်ရှင်ပြောင်းလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်အရင် WWF (World Wrestling Federation) ကနေ WWE ပြောင်းရသလဲဆိုတော့ သူနဲ့နာမည်တူ WWF (World Wildlife Foundation) ကမ္ဘာ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း နာမည်နဲ့ သွားတူနေတဲ့အတွက် ခုလို နာမည်ပြောင်းလိုက်ရခြင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အရင်ကလည်း မူလပထမနာမည်အရင်းအဖြစ် Capitol Wrestling Corporation (CWC) ကနေ the World Wide Wrestling Federation (WWWF) ဆိုပြီး ပြောင်းခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ ဒီဖျော်ဖြေပွဲတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၆နှစ် ၁၉၅၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ၇ ရက်နေ့ကတည်းက စတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ထိုးကြိတ်နေကြတာတောင် သွေးမထွက်၊ မယောင်ကိုင်းဖြစ်တာ ဘာလို့လဲဆိုတာလဲ မေးစရာရှိပါတယ်။ မှန်ပါတယ်ခင်ဗျ။ WWE ပွဲတွေရဲ့ 75% က လုပ်ပွဲများဖြစ်ပြီး ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားအောင် ဇာတ်လမ်းဆင်ဖော်ကျူးထားတာပါ။ ဒါ့ကြောင့်ဖျော်ဖြေရေးနပမ်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ပြီး နာမည်ကို သေချာလေ့လာကြည့်ရင်လည်း “World Wrestling Entertainment” (ကမ္ဘာ့ဖျော်ဖြေရေးနပမ်း) လို့ နာမည်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ သူတို့တိုက်ခိုက်ပုံတိုက်ခိုက်နည်းတွေကလည်း နာကျင်မှုနည်းပြီး ထိရောက်တဲ့ချကွက်မျိုးပဲ အသုံးပြုကြတာပါ။ အနိုင်အရှုံးကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာက နပမ်းသမားတွေရဲ့ Stamina က အဓိကကျတယ်လို့လဲ ထင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ချကွက်တွေဆို ထိတောင်မထိဘဲ ဟန်လုပ်ပြတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဒါဆိုဘာလို့ ဒီလိုလိမ်ပြီးချပြနေတဲ့ပွဲမျိုးကို ပရိသတ်တွေ သောင်းချီလာကြည့်နေကြတာလဲ?? ကွင်းထဲကလာကြည့်ကြတဲ့ သူတို့ဆို ကျွန်တော်တို့ထက်တောင် ပြတ်ပြတ်သားသားမြင်တွေ့ကြမှာပါ။ ဒါတောင် ဘာလို့ဇာတ်လမ်းဆင်လိမ်နေတဲ့ပွဲမျိုးကို အဆက်မပြတ်ကြည့်ချင်နေကြတာလဲ။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ကော ဘာလို့ ဇာတ်လမ်းဆင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်သံ series တွေကို စိတ်ဝင်စားကြသလဲ???
တကယ်အဖြစ်အပျက်မဟုတ်ပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ series တွေကြိုက်တာဆိုရင် WWE ပွဲတွေလည်း အဲလိုရသမျိူးပဲဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ သူ့ပရိသတ်နဲ့သူ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နေတဲ့ WWE ကို မနေ့တစ်နေ့ကမှစပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် series ဇာတ်လမ်းကို Season3လောက်ကဖောက်ကြည့်သလို နားမလည်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အရင်ကတည်းကကြည့် ခဲ့တဲ့သူဆို ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့အထာပါနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့ဆို ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မယ်တောင် တွေးနိုင်တယ်ဗျ။ WWE ရဲ့ မထင်မှတ်ဘဲဖြစ်တတ်တဲ့ Surprise moment တွေကလည်း ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုမှာ ထိပ်ဆုံးကပါဝင်မှာပါ။
WWE ဆိုတာ RAW, SMACK DOWN တို့အပြင် MAIN EVENTS, NXT, SUPERSTAR အစရှိတဲ့နပမ်းပွဲအစီအစဉ်အားလုံးရဲ့ အချုပ်ကို ဆိုလိုတာပါ။ WWE လက်အောက်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကျင်းပရတဲ့ဒီပွဲတွေမှာ Monday ညမှာယှဉ်ပြိုင်တဲ့ RAW, Friday ညမှာယှဉ်ပြိုင်တဲ့ SMACK DOWN ပွဲဟာ အဓိကကျတဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး ခုမှစယှဉ်ပြိုင်မယ့် နပမ်းသမားတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခွေ၊၂ခွေ ထည့်ကြည့်ရုံနဲ့ WWE ရဲ့အနှစ်သာရကိုသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခု WWE ကိုစိတ်ဝင်စားပြီး အမြဲစောင့်ကြည့်နေသူတွေဟာ ဟိုးအရင်ကလေးဘဝကတည်းက ကြည့်လာခဲ့တဲ့သူတွေဆို ပိုမှန်မယ်ဗျ။ အခုနှစ် wrestlemania ပွဲဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက် လူကြည့်အများဆုံးပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာကလည်း WWE ရဲ့ အရည်အသွေးကျမသွားဘူးဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြနေသလိုပါပဲဗျာ။ ဘယ်လောက်အောင်မြင်သလဲဆိုရင် ၂၀၁၆ခုနှစ် တစ်နှစ်တည်းမှာတင် WWE က ရခဲ့တဲ့ အမြတ်ငွေဟာ ဒေါ်လာ ၇၂၉သန်းပါတဲ့။
ဒါ့ကြောင့် WWE ဝါသနာပါတဲ့ ပရိသတ်တွေကို Movie series တစ်ခုကိုစွဲစမြဲမြဲကြည့်နေတဲ့သူတွေလိုပဲ ထင်မြင်စေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ပွဲတိုင်းဟာလည်း လုပ်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ နပမ်းသတ်နေရင်း အဆစ်လွဲ၊ လက်ကျိုး ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းမနည်းပါဘူး။ သူတို့သာတကယ်အပြင်မှာသတ်သလို ချမယ်ဆိုရင် သေချာတယ် ကျွန်တော်တို့ တစ်လကို တစ်ပွဲလောက်ပဲ အနိုင်နိုင်ကြည့်ရတော့မှာပါ။ လုပ်ပွဲတွေသာပွဲတိုင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် Wrestlemania မှာ Undertaker ရဲ့ ၂၁နှစ်ဆက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန် ဘယ်ကျိုးပျက်တော့မလဲဗျာ။ WWE အကြောင်းဆက်ပြောရင်တော့ ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျ။
Myanmar WWE Fans